Vaovao - Nanambara ofisialy an'i Wang Leehom ho masoivoho manerantany ny vondrona Hongchen
Tamin'ny faha-20 martsa lasa teo, ny Jiangsu Hongchen Group (notsongaina taty aoriana hoe Hongchen Group) dia nanao ny fivorian'ny tolo-kevitra momba ny vokatra voalohany tao amin'ny foiben'i Hongchen miaraka amin'ny lohahevitra hoe "Hong Kong Health Lens". Tamin'ny andro nanatanterahana ny hetsika dia nanatrika ny hetsika ireo masoivoho / mpaninjara sy mpanelanelana amin'ny alàlan'ny indostria Hong Kong maro hanatrika ny hetsika hijerena ny fanambarana ny eran'izao tontolo izaoamasoivohon'ny marika Hongchen ary ny fandefasana voalohany ireo lantom-pahasalamana Hongchen vaovao.
Leehom Wang lasa manerantany masoivoho ho an'ny marika Hongchen
Tamin'ny andro nanatanterahana ny hetsika, natrehin'ny vahiny sy ny haino aman-jery indostrialy, ny mpanorina ny vondrona Hongchen Atoa Zhang Jiawen ary ny filoha lefitra ao amin'ny vondrona Hongchen Ms. Wang Yuedi niara-nanokatra ny sarin'ny masoivoho, ary nanambara tamin'ny fomba ofisialy ilay mpitendry mozika malaza eran-tany Wang Leehom ho manerantany masoivoho ho an'ny lantom-pahasalamana Hongchen.
Araka ny fantatsika rehetra, Wang Leehom dia nahazo loka marobe hatreto ary manana laza ambony eo amin'ny sehatry ny mozika. Ireo zava-bita ireo dia tsy afa-misaraka amin'ny ezaka tsy manam-paharoa nataony nandritra ny taona maro.
Andriamatoa Zhang Hong, tale jeneralin'ny Hongchen Group, dia nilaza fa ny fepetra takiana amin'ny kalitao henjana sy fo mahery HO AN'NY manatsara hatrany mifanindran-dàlana amin'ny fenitra avo lenta amin'ny mozika an'i Wang Leehom sy ny fikirizany hatry ny ela. Amin'ny sehatra samihafa, miaraka amin'ny fikatsahana farany ihany, ny sary an'ny Leehom Wang sy Hongchen Group dia mifanaraka tsara. Inoana fa ity fiaraha-miasa amin'ny Andriamatoa Wang Leehom ity dia hitondra endrika vaovao ho an'ny vondrona Hongchen.
Hongchen Group, Sina salama
Ny firenena dia nanapa-kevitra ny "hampihatra ny paikadin'i Shina mahasalama" amin'ny Kongresy Nasionaly faha-19 an'ny Antoko Kaominista any Sina, izay nampiakatra ny fahasalaman'ny vahoaka hatramin'ny faratampon'ny paikadim-pirenena. Mandritra izany fotoana izany, mandrisika ny valanaretina ankehitriny, ny fifantohan'ny olona amin'ny fahasalamana dia mitombo haingana, ary ny tsenan'ny fahasalamana dia manana hery lehibe. Amin'ny maha orinasa tsy miankina eto an-toerana any Shina, dia manaraka akaiky ny torolàlana stratejika nasionaly amin'ny famolavolana ny paikadin'ny orinasa i Hongchen, ary namolavola ny "Hongchen Group • China Healthy" ho drafitra stratejika dimy taona 2021-2026.
Ny fanaovan-tsonia an'i Wang Leehom ho mpitondra teniny dia famantarana ihany koa amin'ny fanombohana amin'ny fomba feno ny fanavaozana stratejika ny vondrona Hongchen Group, manamarika vanim-potoana vaovao ny familiana marika ho avy any Hongchen sy ny firafitry ny fampandrosoana orinasa. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'i Leehom Wang hampiroborobo ny fanavaozana ny paikadin'ny marika orinasa, hampita tsara kokoa ny foto-kevitry ny marika, hitondra fahatokisan-tena bebe kokoa amin'ny fantsona sy ny mpanjifa, hampiditra angovo mety hanan-kery bebe kokoa amin'ny endrika marika Hong Kong Health Lens, ary hanatsara ny lazan'ny Hongchen Health. Vokatra lens.
Vokatra vaovao amin'ny taona "Hongchen Health Lens"
Nandritra io fivoriana fanolorana soso-kevitra io, ny talen'ny varotra marika Yu Ronghai dia namoaka ny drafitra stratejika amin'ny vokatra vaovaon'i Hongchen 2021 "Hongchen Health Lens".
Andriamatoa Wang Gaojun, mpitantana ny sampan-draharahan'ny fiofanana ao amin'ny vondrona Hongchen, dia nanome fanazavana ara-teknika amin'ny antsipirihany momba ny "Lens Hongchen Health".
Fantatra fa amin'ny lafiny teknolojia, "Hongchen Healthy Lens" dia mitondra "Hongchen Antibacterial Cleaning Membrane ", izay afaka mamono bakteria sy viriosy miraikitra amin'ny tampon'ny masolava. Ny taham-pahombiazana dia avo hatrany amin'ny 99,9% taorian'ny fitsapana nataon'ny fikambanana manam-pahefana toa an'i SGS sy Korea KOTITI. Mitohy hatrany ireo lantom-pahasalamana Hongchen, misy bakteria maharitra hiarovana ny fahasalaman'ny maso. Amin'ny lafiny marika, ny tsipika marika rehetra dia namboarina indray ary naka ny sarin'i Wang Leehom's masoivoho, izay niditra teo amin'ny sehatry ny fahitan'ny besinimaro tamina fihetsika vaovao.
Fampisehoana vokatra vaovao
"Hongchen Health Lens" azo itokisana.
Miaraka amin'ny lisitry ny "Hongchen Health Lens" miaraka, ny fitaovana sy ny fitaovana entin'ny vokatra mifandraika amin'izany dia havoaka amin'ny tontolo ivelany koa. Taorian'ny namoahana ilay vokatra vaovao dia nifindra tany amin'ny efitrano fampirantiana ao amin'ny rihana faharoa amin'ny Hongchen Building ireo mpandray anjara rehetra. Tsy ny fampidirana sy ny fampisehoana ny "Hongchen Healthy Lens" ihany no hitanay, fa nahita koa ny ezaka nataon'ny orinasan-masomaso iray eny an-dàlana mankany amin'ny fahasalaman'ny vahoaka sinoa.
Ny mpandray anjara dia naka sary sy nanisy totohondry karatra hanamarihana izany tao amin'ny efitrano fampirantiana. Miaraka amin'ny fakantsary handrakofana izany tizy Hongchen Group, izay niara-niasa nandritra ny taona maro, dia mahery vaika.
Nandritra ny fahazotoana 35 taona, Hongchen Group dia namorona marika solomaso misy fanavaozana rohy marobe amin'ny paikady, vokatra, fantsona, marika ary fifandraisana. Miaraka amina andiana fepetra toy ny fanambaràna nymasoivoho, fanavaozana ny paikadin'ny orinasa, ary famoahana vokatra vaovao, Hongchen Group dia handefa andiam-pifandraisana an-tserasera sy an-tserasera hanomezana hevi-dehibe mahasalama sy vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifa maro kokoa.
fanavaozana, mifantoha amin'ny fikarohana sy fampandrosoana, mitondra vokatra vaovao kokoa ho an'ny mpanjifa, manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fahasalaman'ny olona amin'ny fahitana, ary hampiroborobo ny fampandrosoana haingana ny sehatry ny fahasalamana eto Shina.